Mucheka Zipper, Nylon Zipper, Plastiki Zipper, Zipper Sliders
Metal Zipper, Nylon Zippers, Pure Plastic Zipper, Zippers Pure Chain For Sale
MH Zippers inowanzobatanidza iwe nesu. Tiri kutarisana nemhando dzose dze zippers seyiloni zipper, resin zipper, metal zipper uye zviuru zvezvidimbu zvakasiyana. Kuchinja kwegore negore kunopfuura $ 10 mamiriyoni. Zipper Magazine inowanikwa kune vatengi 'svoti. Unogonawo kushanyira wepaIndaneti yedu yeZipper www.mh-zipper.com.
A: Inowanzoshandiswa-Nzira yekuziva Nhamba yeZipper
Bhani: Dhayi yebhanhire inofanira kuva isina tsvina uye ruvara, Yakabatwa nemaoko, inonzwa iine Soft. Bheni rinoratidzika seinenge rakatarisana nechepamusoro nechepamusoro.
Mazwi: Chimiro chemazino chinofanira kunge chakanyorova. Kana yakashandiswa, iyo inobhadharwa yakaderera pasina ruzha.
Bhudziro: Bhande rinofanira kufamba zvakanaka uye rakasununguka, rakasungirirwa asi harisi kuzouya.
Hem: Mhemberero inofanirana neboka haichazoputsi uye ichibva. Kuparadzanisa pini yekuparadzanisa unit uye kuchengetedza Kuparadzanisa unit: Square Bolt inogona kugamuchirwa pachena.
Pamusoro Pokumisa: Nzvimbo yepamusoro-stop inofanira kuuya pamwe chete neino rinotanga pamusoro pesimbi yepilisi uye wilon. Asi kureba hakugoni kuva pamusoro pe1mm uye kunofanirwa kunge kwakasimba uye inotarisa zvakanaka.
Mugumo wekuguma: Chigadziko chepasi chinofanira kuuya pamwechete nemeno kana kuiswa pamusana uye inofanira kusimba uye kutarisa zvakanaka.
B: Mazano Okusarudza Zipper
Zvimwe zvakagadzirwa zvezipper zvakasiyana nemamiriro ezvinhu, saka kana paine kutenga zippers nyaya dzinotevera dzinofanira kuratidzwa kune muiti:
1. Ndeipi iyo zipper ingashandiswa (zvakadai sokupfeka chitunha chake, shangu, jackit, raincoat, tende, jeans inoda kushambidza nekucheka kweganda ne high acidity) kana zvimwe zvakakosha zvinodiwa.
2. zvinodiwa kune zvakagadzirwa kana zipper: hazvidi kuti iine AZO kana nickel uye inopfurikidza nesero detector.
C: Kubvumirwa Kutsungirira kweZimbiru
Nemhaka ye inertie inokonzerwa nekufambisa kwemashini ekushanda munguva ye manufacfacturing of zipper sezvinozoita sekuzara kwemazino, kuchaonekwa kuregererwa kubvumirwa.
Iyo yakareba iyo zipper ndiyo yakakura iyo inobvumirwa ichave.
Zvikanganiso zvakapiwa neMH zipper Zvikanganiso zvakapiwa nekambani yekashiya mu NEW CENTURE Fair
zera Tsanangudzo (mm)
Base Spec. kubvumidza
Zipper Length (cm) Kutenderwa Kushivirira
pasi pe30 ± 5mm
30-pasi60 ± 10mm
60-pasi100 ± 15mm
pamusoro100 ± 3%
(Kwete-akaparadzaniswa) Zarura-zvo Zipper
(Yakaparadzaniswa) Nzira mbiri Dzakasvinudzwa
Zipper (separable) Nzira mbiri Pedyo-kuguma
Zipper O Tape Nzira mbiri Pedyo-kuguma
Nzira dzeZviperi Mutsara
A = Kureba kwakakwana kweizi
A1 = Ive musoro tape
A2 = Dzorera musoro tape
Yakavharwa-kuguma Zipper Kubva pamucheto wepamusoro wejeri kusvika kune
mupfupa wekumisa pasi.
Zarura-zvo Zipper Kubva pamucheto wepamusoro wejeri kusvika kune
tipfuti chemukati wakazaruka.
Nzira mbiri Inopera Zuva Rekupedzisira Kubva pamucheto wepamusoro wejeri kusvika kune
tipfuti yemucheto wepasi
Zipper neDhaviri Slider
(Yakagadzirirwa muMusoro-Relation) Kubva pamucheto wepamusoro wejeri kusvika kune
tipfuti yemucheto wechimwe chimiro chepasi.
Kunyoresana Pasi) Kubva pamucheto wepamusoro wejeri kusvika kune
Zippers musha Categories --Threads --Zizi --Ribbon & Tape --Ropa --Vanhu - Buttons --Interlining - Tassel & Fringe / Kuchengeta - Kubatsira Zvinhu --Garments & Accessories --Sewing Machine & Parts --Fabric - Vamwe Nezvedu --MH Overview --MH Industrial --- Thread Factories --- Ribbon & Tape Factories --- Laces Factories --MH History - Tara Shows --Image Galleries --Video Album Taura nesu --Inzvimbo nzvimbo --Feedback Community --Join Us